Events | U.N.O.B | Page 2
Concert DVD Release
အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်၍ Concert DVD ကိုအောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ စတင် ဖြန့်ဝေလိုက်ပါသည်။ ဂီတပွဲကို လာရောက်ခဲ့သူများပါမက၊ လာရောက်ခွင့် မရခဲ့သူများအတွက်ပါ အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးဖွယ် တေးသံသာများနှင့် ရပ်ဝေး ရပ်နီး မိတ်ဆွေများအတူတကွ ပြန်ဆုံခွင့်ရသည့် ယခုလိုပွဲမျိုးကို မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရသည့်အတွက်လည်း အထူးဝမ်းသာမိပါသည်။ ကောင်းမွန်ထူးခြားတဲ့ပွဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပင်ပန်းရကျိုးနပ်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။(ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့) DVD အခွေများကိုမှာယူလိုပါလျှင် (သို့မဟုတ်) အသေးစိတ်သိလိုပါလျှင်- Ye Min Oo (561)685-8470 (Jupiter) ၊ Ko Kaung (954)295-5993 (Miami) Nay Win Tun (239)961-0342 (Naples) Read More...
UNOB မိသားစုများ မိတ်ဆုံစားပွဲငယ်တစ်ခုကို October32009 နေ့တွင် West Palm Beach, Singing Bamboo စားသောက်ဆိုင်၌ ဧည့်ခံကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ဖိတ်ကြားထားသူများ စုံလင်စွာတက်ရောက်ကြပြီး ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ဦးမှ အဖွဲ့တွင်တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကာ ဂုဏ်ပြုလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ [nggallery id=11] Read More...
Here are the some pics from concert, really cool and thanks to Ko Myat Soe (Photographer). if someone needed to contact him for the pics, his email address is ( mmtsoe@yahoo.com). [nggallery id=10] အချင်းချင်းဆွေးနွေးရန်၊ အကြံဥာဏ်များပေးရန်အတွက် Comment Section ကိုထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားခြင်းအားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော Comment များကိုသာရေးသားကြပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ယခု Website တွင်လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိနေသော လူကြီးမင်းသည် စာရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်သည့် အသက်အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိရေးသော Comment များသည် မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤ Website (unobusa.org) ဖြင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် unobusa.org Read More...
အခြေအနေ အကြောင်းရင်းများစွာအပေါ်မူတည်၍ ပွဲစီစဉ်သူများမှ တညီတညွတ်တည်း ဂီတပွဲလုပ်ရန်နေရာကို အောက်ပါနေရာတွင် ရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။ လက်မှတ်များလည်း စတင်ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ တာဝန်ခံများကို ဆက်သွယ်၍ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ခန်းမသည် ထိုင်ခုံ ၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး Stage စင်ကို နေရာတိုင်းမှ ကောင်းမွန်စွာ မြင်နိုင်ပါသည်။ လက်မှတ်ဈေးနှုံးကို $40 သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ထိုင်ခုံနေရာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အဆင်ပြေသလို နေရာယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ( မိသားစုများနှင့် လူကြီးများကို ဦးစားပေးစေလိုပါသည်။) DATE & TIME LOCATION အချိန်- ညနေ ၇ နာရီမှ ၁၁ နာ၇ီ (စနေနေ့ည) နေ့ရက်-၂၀၀၉ခု စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက် နေရာ-TCMA Performing Arts Center (Web site) 2452 Lyons Road Coconut Creek, FL-33063 Google Direction | Floor Plan (ခုံနေရာ) FOOD & DRINKS TIPS စားသောက်ခန်းမတစ်ခု စီစဉ်ထားပါသည်။ ခန်းမ အချိန်မှာ ညနေ ၅နာရီမှ ၇နာရီ အထိဖြစ်ပြီး သဒ္ဓါနည်းများမဆို ရံပုံငွေ ထည့်ဝင်၍ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပင်မ ဂီတပွဲခန်းမ အတွင်းသို့ အစားအသောက်များ ယူဆောင်ခွင့် Read More...
Myanmar Charity Group, Ko Tin & his friends and UNOB အဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်း၍ Florida ပြည်နယ်အတွင်း ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုတင်ဆက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ တေးဂီတ၀ိုင်းအနေဖြင့် Lazy Club ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုတော်များမှာ ချစ်ကောင်း၊ ဇော်ပိုင်၊ Rဇာနည် နှင့် သဇင် တို့မှသီဆိုဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂီတဖျော်ဖြေမှုပွဲများဖြင့်အတန်ကြာဝေးကွာနေသော ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် သတင်းကောင်းအဖြစ် ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ လက်မှတ်ဈေးနှုံးမှာ $50 (သို့)$40 ဖြစ်နိုင်ပြီး နေရာ၊နေ့ရက်နှင့် အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို မကြာခင်ထပ်မံ ကြေငြာပါမည်ဟုကြားသိရပါသည်။ အထက်ပါ ဖုန်းနံပတ်များသို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ စီစဉ်သူများအနေနှင့်လည်း Florida ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှ လူတိုင်းလာနိုင်စေရန်အဓိကထား စဉ်းစားစီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ ဂီတပွဲကို တိုင်းရင်းသားများအားလုံးစုံစုံညီညီ၊ စည်ကားသိုက်မြိုက်ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အားလုံးမှပါဝင်ကူညီကြပါရန်နှင့်ဗမာပြည်ဖွား Florida ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများ အားလုံး၏ ညီညွတ်မှုကိုလည်း ပြသနိုင်မည့် အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစား၍ လာရောက်အားပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ Read More...